ISLAAMKA IYO MUNAASABADAHA. – Sumcadda Islaamka
ISLAAMKA IYO MUNAASABADAHA.
Munaasabad waa sanadguuro micno iyo milgo ugu fadhida cidda ay soo martay ama murug iyo xusuus mugdi ah ku leh qolada ay qusayso.
In kasta oo inta badan aadanaha ay soo jireen u tahay weyneynta munaasabadaha farxadda xambasrsan misana waxaa jira qaar aan ka tagin oo si murug leh u xusa maalmaha ku madoow noloshooda.
Dadka islaamka ah waxay ka mid yihiin umadaha dunida ku nool ee inta badan xusa sanadguurooyinka muhiimka ku ah taariikhdooda ama ha ahaadeen kuwa diini ah ama ha ahaadeen kuwo dunawi ah.
In kasta oo ay qaar culimada islaamka ka mid ahi diidaan xuska maalmaha ka baxsan labada ciidood ee islaamku leeyahay,misana waxaa jira culimo kale oon iyagu dhib u arkin xuska maalmo sharafeedka muslimiinta waxay culimadaas ku doodaan in diinta islaamka ay ka buuxdo nusuus baritaaraysa ama laga fahmi karo in aysan dhib lahayn in la xasuusto maalmaha farxadda iyo wax ku oolnimada ah u muslimiinta.
Tusaale ahaan rasuulka scw waxa uu soo galay magaalada madiina oo uu ku arkay inay yahuuddu soomaan maalinta caashuuraa,kolkii uu weydiiyayna waxay ku yiraahdeen waa maalintii nabi muuse iyo reer banuu isra’iil la badbaadiyay fircoona la halaagay. Markaasuu yiri annagaa nabi muuse oga xaq leh yahuudda wuxuuna amray in la soomo maalintaas oo ciddii soontana ay helayso dambi dhaaf sanad ah.
Mar kale waxay asxaabtii nabiga scw arkeen nabiga scw oo sooma isniinta wayna waydiiyeen kolkaasuu ku yiri waa maalintii aan dhashay waxyigana laygu soo dajiyay.
Maalin kalana nabiga scw wuxuu xusuustay oo ka sheekeeyay isbahaysi dulmiga lagula dirirayay oo waqtigii jaahiliga magaalada makka laga yagleelay waa intii uu waxyiga ku soo dagine,isbahaysigaas oo loo yaqaanay “xulful fuduul””حلف الفضول”
Wuxuu rasuulka yiri isaga oo kale haddii maanta la iigu yeero waan ajiibi lahaa.
Waxaa kale oo quraanka ku jiro aayado tilmaamaya oo xusaya dhalashadii iyo dhimashadii iyo maalinka la soo saari doono qaar ambiyada ka mid ah.
“وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ”
Nabi ciise cs wuxuu yiri:-
“Nabad galyo dusheyda ha ahaato maalinta lay dhalay iyo maalinta aan dhimanayo iyo maalinta lay soo saari doono aniga oo nool”.
“وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا”
“Nabi yaxye-Nabadi ha usugnaato maalinta la dhalay iyo maalinta uu dhiman doono iyo maalinta la soo saari doono isaga oo nool”
Culimada qabta in munaasabadaha khayrka iyo farxadda ku saabsan la xusi karo waxay soo daliishadaan adillo badan oo ay kuwaa aan hadda sheegay ka mid yihiin iyo kuwo kale oo badan.
RABBI UMA KALA ROONA RAG IYO DUMAR